UTSHATILE KWI-FIRST SIGHT'S SONIA GRANADOS NGOBOMI NGENICK: EXCLUSIVE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Ukutshata ekubonweni kokuqala kukaSonia Granados kuBomi kunye noNick Pendergrast Emva kovavanyo: Kuphela
Ukutshata ekubonweni kokuqala kukaSonia Granados kuBomi kunye noNick Pendergrast Emva kovavanyo: Kuphela
Ukutshata kuMboniso wokuQala uNick Pendergrast kunye noSonia Granados. (IGio Morales / FYI)
Ngu: Kelly Spears 11/01/2016 ngo-11: 30 PM
USonia Granados wayithemba inkqubo xa wasayina watshata nomntu ongamaziyo ngokupheleleyo kwii-FYI's Ukutshata ekuboneni kokuqala . Emva kokudibana nomyeni wakhe, UNick Pendergrast , esibingelelweni ngosuku lwabo lomtshato, esi sibini sahamba ngendlela yaso kwiiveki ezintandathu kwi-khamera, kwaye ekugqibeleni sagqiba ekubeni siqhubeke nomtshato waso ngaphaya kovavanyo.
Ngoku ukuba iikhamera ziyekile ukuqengqeleka, iGranados ivula ngokukodwa Ingcaciso malunga nobomi ngaphandle kwescreen kunye nePendergrast, kunye nezicwangciso zesibini zekamva.
Kwimeko ekhethekileyo yokuhlangana kwakhona-eyadlala ngolwesiBini, nge-1 kaNovemba-ababukeli bafunda ukuba unontlalontle osekwe eMiami kunye nomyeni wakhe basahleli kunye kwiinyanga ezintandathu emva kovavanyo. Nangona kunjalo, le nkqubo khange ibe lula, echazwa yiGranados Ingcaciso.
Kwakukho amaxesha amaninzi akhokelela ekudibaneni kwakhona xa ndandingacingi ukuba singayenza, utyhila. Ndicinga ukuba bendisokola noku ngamanye amaxesha, kuba kunokuba nzima xa umntu engathethi ulwimi lwakho lothando.
amaxabiso aphakathi kwezimemo zomtshato
Akusekho kubenzi bemveliso yokufota ngokuhamba kwezibini eziye zavumela iGranados ukuba yazi ngcono iPendergrast. Olona tshintsho lukhulu kukuba ndiziva ngathi sinokuba zizinto zethu ngokupheleleyo xa sithetha ngezinto ezibi, ukuqhula, nokuthetha kwinqanaba elinzulu kunoko besinjalo kwiiveki ezintandathu zokuqala sinekhamera ezijikeleze, iGranados isixelela. Ndiye ndaqaphela nokuba uNick unokucinga kakhulu ngamanye amaxesha. Umama ebesedolophini kutsha nje, kwaye [wamthengela] iilekese kunye nezinto, kuba uyazi ukuba uyazithanda. Ngokuqinisekileyo ubonisa ukuba uyakhathala ngokunika izipho.
Ngelixa ubudlelwane bakhe kunye nePendergrast bukhulile, uGranados uyavuma ukuba ukungabikho kothando lwakhe ngumsebenzi oqhubekayo. Ndisazama nangoku into yokuba uNick akathandani, kuba nomama ebengenalo uthando, uyaphawula. Ndicinga ukuba seso sizathu sokuba ndimqonde ngcono, kodwa ndisafuna uthando lomzimba ukondla umphefumlo wam.
Njengoko esi sibini siqhubeka nokwakha ubuhlobo babo, uGranados utyhila ukuba akakathandani nomyeni wakhe. Ndiyamthanda kakhulu uNick, kodwa andithandani naye… okwangoku, uyachaza.
Umntu osandul 'ukutshata usafumana iindlela zokubonisa iPendergrast ukuba uyakhathala ngaye. Ukunyaniseka, andikaqondi ukuba ndibonisa uthando lukaNick ngendlela ayixabisa ngayo, kodwa ndiziva ngathi ndizamile ukucinga ngaye xa ndisenza izinto ezithile, uGranados usixelela. Ndizama ukuba ngumfazi olungileyo, kodwa ndiyathintelwa ngamaxesha athile kunye namaxesha.
ungazi njani ukuba idayimane iyinyani ekhaya
Ukutshata eSony Sight kunye noNick. (Ifoto ngoncedo lwe-FYI)
Emva kosuku lwabo lwesigqibo, esi sibini safudukela kwikhaya elitsha. Babenesivumelwano sexesha elifutshane ngexesha lokufota, kwaye kufuneka bafumane indawo entsha yokuhlala kunye neenja ezimbini zasePendergrast. Saqesha indlu ngapha kwesitrato ukusuka kwindlu esasihlala kuyo ngexesha lokufota, izabelo zaseGranados. Safumana ikhaya saza salithanda. Ine-vibe elungileyo kakhulu… ivulekile kakhulu kwaye iyadi yasemva intle. UNick wenze ngcono nangakumbi ngokuhombisa kunye nezakhono ze-DIY!
Ngexesha leveki yokugqibela yolingo, uGranados kunye nomyeni wakhe bakha ibhodi yombono. Ngelixa besebenza kule projekthi, i-duo yafunda ukuba babelana ngomnqweno wokuba nabantwana. Khange sicinge ngosapho okwangoku, uyachaza Ingcaciso . Andiyiyo inkukhu yasentwasahlobo, [nangona], ke ndicinga ukuba ndingathanda ukuba nabantwana kule minyaka mibini izayo.
Ngexesha lokudibana kwakhona okhethekileyo, iPendergrast kunye neGranados 'yabalingane bexesha eline-4, UTom Wilson uphe umfazi wakhe, ULillian Vilchez , Ngomsesane wokuzibandakanya ukutshatisa ibhendi yakhe yomtshato. UGranados uyachaza ukuba yena nomyeni wakhe abanazicwangciso zomtshato wesibini, kodwa umsesane wokuzibandakanya awukho ngaphandle kombuzo. Ndingathanda ukuba nendandatho yokuzibandakanya, ukuba yile nto mna noNick siphela sikhetha umgca, uyaphawula.
IGranados kunye nePendergrast baba ngabahlobo nelinye ixesha labathathi-nxaxheba be4. Kunye noWilson noVilchez, bachitha ixesha kunye UHeather Seidel kwaye UDerek Schwartz . Ndifundile ukuba sonke sinokuninzi ngokufanayo [ngenxa] yamava, kodwa ngokuqinisekileyo sahlukile kakhulu, uGranados ugqiba Ingcaciso. Ndifundile ukuba mna noNick sahluke kakhulu [ukusuka] kuso nasiphi na isibini esele sikhona Ukutshata ekuboneni kokuqala , kwaye kulungile. Sobabini sihle kwaye siyothusa kwaye, sagqiba kwelokuba siqale kwindlela yabahlobo epholileyo kulwalamano lwethu. Rhoqo amaxesha, asibonisi uthando lwethu omnye komnye ngaphandle, kodwa silubonisa ngamaxesha angaqondakaliyo.
Ukutshata ekuboneni kokuqala izakubuya isizini yesihlanu ngo-2017. Imveliso iyaqhubeka eChicago.
izipho zomtshato ezizezakho zeendwendwe
isipho sentombi ngosuku lomtshato
ilokhwe yomtshato elula yomtshato wesibini
iilokhwe zomtshato kunye nabafazi abatshakazi